Sida loo tirtiro finanka ka dib marka la suuxo | Ragga Caqliga leh
Sida meesha looga saaro finan ka dib wax -soo -saarka
Ka -soo -saaridda ka dib, dhibaatooyin daqiiqaddii ugu dambaysay ayaa dhici karta oo na abuurta damqasho iyo finan. Xaaladahan oo kale maqaarku wuxuu dareemaa xanaaq saamayn gubasho si aad u sii joogtid casaan. Si looga fogaado habsocodkan, waxaan soo jeedin doonaa tilmaamo taxane ah si meesha looga saaro finanka ka dib wax -soo -saarka.
Dhibaato kale oo ku dhacda waa marka kuusyo ayaa la abuuraa. Markay timuhu dib u soo baxaan, waxay isku dhex milmaan maqaarka dhexdiisa, halkaas oo ay ku korto oo ku duudduubto gudaha, soo saarta finan yaryar oo cas. Si looga fogaado dhibkaan, talooyin taxane ah ayaa la adeegsan karaa oo aan dib u eegno.
1 Talooyin si aad isaga ilaaliso firiiric ka dib wax -soo -saarka
2 Talooyin iyo tabaha lagu yareynayo finan
Talooyin si aad isaga ilaaliso firiiric ka dib wax -soo -saarka
Guud ahaan, maqaarkaagu wuxuu noqon karaa mid aad ugu nugul hel cuncun iyo finan. Isticmaalka mandiil gacmeed ee maqaarka qalalan waxay u badan tahay inay dhibaatada keento. Isticmaalka daab cad ayaa khatarta sii kordhinaysa. Tilmaan ka hor wax -soo -saarku waa inaad ilaaliso maqaarkaagu nadiif yahay oo uu ka sarreeyo wax kasta oo aad u biyo badan, waxaad samayn kartaa inta u dhexeysa saddex illaa shan daqiiqo ka hor inta aadan xiirin
Haddii aan ku xiirayo mandiil, waan awoodnaa isticmaal nooc ka mid ah jel ama xumbo si marinka maqaarku maqaarku u noqdo mid aad u jilicsan oo aad u subag badan. Sidoo kale ka hor intaan la bixin baas kasta ee timaha ka -saaridda way ka fiican tahay qoyan daabkii oo mar walba jihada timuhu ka baxaan.
Waxay noqon kartaa maqaar saar ka hor intaadan wax xoqin, wuxuu ka kooban yahay cusboonaysiinta maqaarkaaga iyadoo laga saarayo unugyo dhintay oo xad -dhaaf ah oo ku dheggan. Hababka la adeegsan karo waa saabuun kiimikaad, alaab dabiici ah oo leh dhagxaan yar yar ama qalab leh jajab wareegsan. Ka saarida unugyada waxaan u dayn doonaa waddo xor ah oo timuhu ku koraan.
Baalayaasha iyo qaabkoodu sidoo kale waxay ku adkaadaan cuncun ka dib wax -soo -saarid. Haddii aad leedahay garbaha keliya ee la isticmaalo waxaa fiican inaad u isticmaasho hal mar timo -qaadid kasta, iyo gaar ahaan inaad isticmaasho kuwa ku siinaya dhowr xaashiyo iyo silsilado gel ah oo madaxa ku yaal. Markaad wax dubeysid, ha isku dayin inaad dhowr jeer ka gudubto mindida isla aagga.
Ballaarinta daloolada Sidoo kale waa fikrad aad u wanaagsan, dabcan ka hor intaadan wax saarin iyo meelaha ugu jilicsan. Waxaad isticmaali kartaa kuleyl si kor loogu qaado saameyntan, ku xiirashada saabuun kulul iyo biyo ama tag shukumaan aad u kulul maqaarka dhowr daqiiqadood si dalooladu u furmaan. Sidaas ayay aad ugu fududaan doontaa soo saarista timaha.
Talooyin iyo tabaha lagu yareynayo finan
Haddii aad si taxaddar leh uga taxaddartay inaad ka fogaato firiirican dhibta badan, oo ay weli leedahay, waxaan haynaa talooyin kale oo taxane ah oo kaa caawin kara inaad ka takhalusto xanaaqa xanaaqa badan.
Haddii cuncunku yahay mid degdeg ah, waxaa lagu dabaqi karaa aagga maro qoyan biyo aad u qabow si loo dejiyo gubashadaas. Waxa kale oo suuqa ku jira badeecado kala duwan oo u adeegsada sida kareemada la mariyo wax -soo -saarka ka dib.
Qoyaan maqaarka Hawshaan ka dib sidoo kale waa lama huraan, si aad u hesho dareen degenaansho. Maqaarka oo si fiican loo qoyay, calaamadaha cuncunka iyo muuqaalka finan maqaarka ah ma muuqan doonaan.
Waxaa jira kiriimo suuqa yaala Vero qadhaadh. Sidoo kale jelka geedkaan oo si toos ah looga soo ururiyey geedka wuxuu leeyahay hanti aad u qoyaan badan, dejin iyo soo celin. Hayso awood bogsiin sare waqti yarna waxaad ku arki doontaa sida aaggaas loo dayactiro.
Subag Shea waa huuriye u fiican maqaarka dillaacay. Waxaad xoogaa u kululayn kartaa ka hor intaadan codsan, maadaama ay kor u qaadi doonto saamaynteeda. Saliidaha kale sida saliid musket Aad bay u bogsanayaan, waxay noqon kartaa jel ama buufin ay ku jirto qaybtan. The saliidda yicibta Sidoo kale waa mid aad u nafaqo iyo qoyaan badan, mid kasta oo ka mid ah saliidahan waxaa lagama maarmaan noqon doonta in la mariyo ka dib wax -soo -saaridda iyo duugista illaa la nuugo.
Haddii aadan gacanta ku hayn mid ka mid ah saliidahan, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad dhex gasho saliida ilmaha. Waa biyo aad u qoyaan badan oo qoyaan badan. Wuxuu dejin doonaa maqaarka haddii uu ahaa mid qallafsan oo ku habboon wax -soo -saaridda ka dib.
Way ku habboon tahay naftaada ha u soo bandhigin qorraxda ka dib wax -soo -saarka maxaa yeelay waxay sii kicin kartaa maqaarka waxayna ka sii dari kartaa. Waxaa kaloo lagula talinayaa ha xidhin dhar aad u adag taas oo maqaarka ku xoqan karta oo aan oggolaan in maqaarku dhidido. Xaaladdaada way fiican tahay haddii ay dabacsan tahay oo ay ka kooban tahay suuf.
Haddii ay dhacdo in aagga xanaaqsan uu gaaro in ka badan, waxaa laga yaabaa inay dhacday caabuq labaad oo ku dhaca xuubka. Marka la eego kiiska, waa lagama maarmaan in la joojiyo caabuqan tanna waa inuu qiimeeyaa dhakhtar takhasus leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sida meesha looga saaro finan ka dib wax -soo -saarka